Biyo la'aan laga soo sheegayo qeybo kamid ah Galmudug | KEYDMEDIA ONLINE
Biyo la’aan laga soo sheegayo qeybo kamid ah Galmudug
Cabasho tiro badan ayaa ka soo yeeraysa xilligan qoysas reer miyi ah oo ku dhaqan degaanno ka tirsan Gobolka Galgaduud oo ka tirsan Maamulka Galmudug.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Degaanka Balaal-Dheer iyo Cadda-Kibir oo hoostaga degmada Cadaado, ayaa hadda ah halka ugu daran ee ay dadku ku wajahayaan haraadka, waxana ka idlaaday xoolihii yaraa ee ay hanti ka heysteen.
In ka badan 200 neef oo arri ah ayey biyo la'aantu galaafatay sacaadihii ugu danbeeyey degaannadaasi, iyadoo iminka ay dadku raadinayaan biyo ay dhuunta mariyaan si ay noloshooda u badbaado.
Hoggaanka Galmudug oo ay baaq u direen ayaa dhagaha ka xirtay dadkan reer miyiga ah ee tabaaleysan, waxana degaannadan biyaha ay dadku cabaan looga soo qaadaa degmada cadaado, mana badno jirkaamada biyaha ee soo gaara.
Dadkii ayaa noqday xubeer aan waxba heysan, iyagoo xilligan la' goob ay maciinsadaan, waxana waxyaabaha meelahaasi ku xayiraya ugu weyn dhaqaale la'aanta aggahooda taala.
Aafada abaarta ayaa u muuqata mid ku baahday guud ahaan dalka, iyadoo jilaalka uu sii socon doono 4 bilood ee ina soo aaddan, waana mid kordhin karta khatarta noleleed ee ay dadkani reer miyiga ah wajahayaan.
Soomaaliya abaarta ku dhufatay ayaa sanadkan galaafatay tiro xoollo ah oo kor u dhaafeysa 6-kun oo neef oo u badan arri iyo lo', waxana sidoo kale jira caddad dad ah oo u geeriyooday xaalad cunno yarri, iyo biyo la'aan ah, lamana hayo dowlad ama hay'ad sama fal oo dadkaasi la gaartay kaalmo.